सुत्ने बेला कुन दिशामा सिरानी बनाउँदा राम्रो ? शास्त्रिय र बैज्ञानिक अर्थ के छ ? एक पटक सबै ले पद्नुपर्नु कुरा मन परे सेयार गरौ – Khula kura
सुत्ने बेला कुन दिशामा सिरानी बनाउँदा राम्रो ? शास्त्रिय र बैज्ञानिक अर्थ के छ ? एक पटक सबै ले पद्नुपर्नु कुरा मन परे सेयार गरौ
ब्यानर न्युजसमाचारस्वास्थ्य जीबन शैली
हामी कसरी सुत्छौं,
कमै मानिसहरुले आफूलाई यो ख्याल राखेको हुन्छ । वा सुत्नु पर्ने जस्तो सयन कक्ष हामीलाई नहुन सक्छ । कि हामी आफैं आफ्नो जिन्दगीदेखि लापरवाही गर्दछौं ।
बदलिदो समाज फेरिदो जीवनशैलीसँगै कसरी धेरै धनसम्पत्ति आर्जन गर्ने ? भन्ने ध्यानमा हुन्छन् ।
आफ्नो दिनभरिको थकान मेट्ने सयनकक्षमा कसैको ध्यान कम हुन्छ । मीठो निद्राका लागि नरम र आरामदायी सिरानी हुनुपर्छ। सिरानीको राम्ररी हेरचाह गरिएन भने त्यो विभिन्न रोगको कारण बन्न सक्छ।
पुरानो भएपछि सिरानी ब्याक्टेरियाको घर बन्छ। विशेषगरी फोम भएका तकिया आरामदायी हुन्छन्। सुत्दा यस्ता तकियाले टाउको र घाँटीअनुसारको सेप लिन्छन्। गर्भवती महिलालाई पनि यस्ता तकिया प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ।
कपाल चिसो छ भने तकियामा टाउको नराख्नुस् सिरानीसँगै त्यसको खोलमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। तपाईको सुत्ने तरिकाले पनि जीवनशैलीमा धेरै परिवर्तनहरु दिइरहेको हुन्छ वा लाभहानी भइरहेको हुन्छ ।
हिन्दु धर्ममा हरेक कार्यको नियम बनेको छ । हरेक कार्यलाई धर्म र अनुशासनको नियमले बाँधिएको छ । शास्त्रका अनुसार जब दिनभर काम गरेर थकान महसुस हुन्छ र हामी निदाउनका लागि बिस्तारामा जान्छौँ त्यतिबेला पनि दिशाको ख्याल गर्नुस् ।
कुन दिशामा सिरानी राख्ने आफू कसरी सुत्ने ?
आजभोलि धेरै मानिसहरु बास्तु शास्त्र प्रेमी भएका छन् तर, अक्कल भने पुर्याउँदैनन् ।
यस्तो छ हिन्दुधर्म अनुसार राम्रो नराम्रो ः
बास्तु शास्त्रको अनुसार यता सिरानी राखेर सुत्दा विद्याको कहिल्यै कमी हँदैन भनिन्छ । तपाई विद्याको धनी बन्नु हुन्छ । जसले सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ ।
पश्चिम दिशाः यो दिशामा सिरानी राखेर सुत्दा नाम, इज्जत र पहिचान पाइन्छ । आफ्नो प्रतिष्ठा बढेको महसुस हुन्छ ।
मानिसले ख्याल गर्नु पर्ने मूख्य कुरा यहि हो । यता सिरानी राखेर सुते हिन्दु धर्म शास्त्रमा खतरनाक मानेको कछ। विभिन्न प्रकारका रोगहरुले सताउने आक्रमण गर्ने बताइन्छ ।
यो दिशामा सिरानी राखेर सुत्दा कहिल्यै धनको कमी हुँदैन । तपाईको जेब सधैं भरिलो हुन्छ भन्ने विस्वास छ । तपाईलाई धनसँगै खुशी र समृद्धि प्राप्त हुने शास्त्रमा लेखिएको छ । सकारात्मक उर्जा पैदा भइ जीवन मनमोहक बन्ने कुरामा विस्वास छ ।
सुत्ने विषयलाई शास्त्रिय मान्यता मात्र होइन खासगरी पृथ्वीमा चुम्बकिय तत्वसँग पनि गाँसेर बुझिन्छ । यो सत्य अकाट्य पनि हो । विज्ञानले धेरै कुरा पत्ता लगाइसक्यो । दक्षिणबाट उत्तरतर्फ लगातार चुम्बकिय तरंग प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । जब हामी दक्षिणतर्फ टाउको राखेर सुत्छौं, तब यी उर्जा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ । र खुट्टाबाट निस्किएर बाहिर जान्छ । यही कारण विहान उठ्दा मान्छेले ताजगी महसुष गर्छन् । यो विज्ञानले पुष्टि गरेकै कुरा हो ।
तर, यदि उत्तरतर्फ टाउको र्फकएर सुत्छौ, तब ठीक विपरित ढंगले हाम्रो शरीरमा चुम्बकिय तरंग प्रवाह भई नकारात्मक असर पर्दछ । खुट्टाबाट प्रवेश गरेर टाउको बाट चुम्बकिय तरङ्ग निस्कन्छ । यसको साइड इफेक्ट हुन्छ । अल्जाइमर वा मस्तिष्कसम्बन्धी समस्या हुन्छ । उच्च रक्तचापमा पनि यसको कारण मानिएको छ ।
त्यसैले हामी सबैले दक्षिणतर्फ टाउको फर्काएर वा सिरानी बनाएर सुत्नुपर्छ ।
सिरानी कता बनाउने भन्ने कुरा पृथ्वीको चुम्बकिय अवस्थितीलाई आधार मानेर तय गर्नु राम्रो हुन्छ ।
यदि हामीले सिरानी पूर्वी दिशामा बनाए र सुते स्वास्थ्य एवं मानसिकतामा राम्रो प्रभाव पार्ने गर्दछ । सूर्योदय हुने स्थानमा खुट्टा पारेर सुत्नु भने हुँदैन ।
यस्तो छ कारण माझण्ड समूहले प्रचण्डलाई बनायो संसदीय दलको नेता
बैंकबाट घर कर्जा लिदै हुनुहुन्छ ? कर्जा लिन केके चाहिन्छ ? ध्यान दिनुस् यी २३ महत्वपूर्ण कुरा